Is dhexgalka u dhexeeya Qalabka Ciyaarta Caruurta Dibada iyo Deegaanka | GFUN
Is dhexgalka u dhexeeya Qalabka Ciyaaraha Caruurta Dibada iyo Deegaanka
Carruurtu waxay jecel yihiin hadiyadda, waa inay noqdaan kuwa aan caruusadaha ku ciyaarin, naqshada xiisaha leh waxay cunugga u keeni kartaa farxad aan dhammaanayn. Qalabka ciyaarta carruurta Qaar ka mid ah saaxiibbada carruurta xiisaha u leh iyo qalabka ciyaarta ee carruurta lagu cayaaro ayaa khatar khatar ah u leh carruurta. Sanad kasta, in kabadan 100,000 oo caruur ah ayaa ku lug leh shilalka waa weyn sababtuna tahay qalabka ciyaarta caruurta waxayna u baahan yihiin in isbitaal loo aado si loo daweeyo.
Sidaa darteed, marka la dooranayo qalabka ciyaarta ee carruurta, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo oo keliya qalabka ciyaarta, laakiin sidoo kale tilmaamaha baakadaha. Qalabka ciyaarta carruurtu waxay kicin karaan xiisaha carruurta ee barashada dhexgalka bey'ada. Qalabka ciyaarta bannaanka waxaa loo habeeyay si ku habboon jawiga bannaanka.
Waxay si wax ku ool ah u hawl galisaa jawiga siyaabo kala duwan, iyadoo aasaaska u ah sahaminta firfircoon ee carruurta, barashada firfircoon iyo xallinta dhibaatada. Koritaanka ilmaha ayaa waxbadan ka leh deegaanka nololeed. Hadduu ilmuhu xishood badan yahay, had iyo jeer ma aad u hadli kartid cod dheer. Waa inaad isaga daryeeshaa oo aad ku celcelisaa geesinimadiisa si ula kac ah. Waqtigaan, waad u qaadan kartaa inuu kula ciyaaro qalabka ciyaarta caruurta. Sababtoo ah isboortigaani waa isboorti dhameystiran, ma ahan oo keliya in lagu hormariyo wada noolaanshaha carruurta iyo kartida gacmaha, laakiin sidoo kale in loo ogolaado canugga inuu noqdo geesiyaal, ha u ogolaado inuu la kulmo dhibaatadan kaligiis. Waxaan si taxaddar leh kula talinayaa isbadal bir ah oo bir ah oo carruurtu ku ciyaaraan. Isagu wuu naga caawin karaa daryeelka carruurta.
Waxay sidoo kale iga dhigtay inaan garto in tani ay ku habboon tahay isboortiga carruurta, ma ahan oo keliya in la tababaro xoogga jireed, laakiin sidoo kale qalbigeyga wuu xoogan yahay. Carruurta qaarkood waxay ku dhashaan geesi, waa inaadan cadaadin tayadiisa, waa inaad si sax ah u xukumaan, waana inaad si sax ah gacanta u qaadataa. Markay carruurtu sidan oo kale ciyaaraan, waxay jecel yihiin inay ciyaaraan kaararka ayagoo aan lahayn wax caqligal ah. Tusaale ahaan, waxay jecel yihiin inay gadaal u socdaan. fuul, maadaama ay aad ugu dhib badan tahay, kuna qanacsan tahay hamigiisa. Xaaladdan oo kale, haddii loo dammaanad qaadi karo inay amaan tahay, waxay xor u yihiin inay la ciyaaraan qaar ka mid ah qalabka ciyaarta ee carruurta, taas oo muujin karta hal abuurkooda.